विकास बैंकहरु मध्ये कुन सबैभन्दा अब्बल, नाफामा को अघि ?
काठमाडौं : नेप्सेमा सूचीकृत १० राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २ अर्ब ७२ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यो गत वर्षको भन्दा १२.३४% ले बढी हो । गत वर्ष बैंकहरुले २ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । पछिल्लो समय विकास बैंकहरुमा मर्जर–एक्विजिसनको लहर छ । अधिकांश विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान थालेका छन् । १० राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमध्ये पनि केहीले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का रहेको छ । यसैबीच हाल कायम रहेका यी बैंकहरुको खुद नाफा, चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, खुद ब्याज आम्दानी र प्रतिसेयर आम्दानीको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छौं :
थोरै बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
आइपीओ ल्याउन लागेको प्रभु लाइफको असोज २९ मा एजीएम, यस्ता छन् एजेन्डा
नाडेप लघुवित्तको असोज २८ मा एजीएम, बोनस वितरण अनि सेयर स्वामित्व परिवर्तन मुख्य एजेन्डा
एनआरएन लघुवित्तले एफपीओ निष्कासन गर्ने
गुराँस लाइफको ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर असोज १३ बाट लिलामी खुल्ने